घरबिदामा रहेका डा. शाक्यद्वारा अनलाईन सेवा उपलब्ध। - prawaskhabar
बिश्व चुनौतिको रुपमा बढिरहेको कोरोना भाईरस सङ्ग समग्र विश्व जुधिरहेको बेला कतारमा कुनै नेपालीलाई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भए अनलाईनमा सम्पर्क गर्न डा. नरेन्द्र शाक्यले जनाएका छन।
डा .शाक्यले आफ्नो इमो नम्बर (००९७४-७७१२५२४५) सार्बजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन। बिगत लामो समयदेखी कतारको अलखोर स्थित एक निजी मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत फिजिसियन डा.नरेन्द्र शाक्य बिगत दुई महिना देखि घरबिदा नेपालमा रहेका छन। लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका डा.शाक्य आफू सुरक्षित रहेपनी प्रबासमा रहेका नेपालीहरुको चिन्ता लिएका छन। लामो समय कतारमा रहदै नेपाली लगाएत बिभिन्न देशका नागरिकहरुलाई सेवा गर्दै आएका थिए।
प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली लगाएत अन्य नागरिकलाई स्वास्थ्य दिन नसकेपनी कुनै स्वास्थ्य समस्या भए अनलाईन सम्पर्क गर्न डा. शाक्यले सबैमा अनुरोध गरेका छन। डा. शाक्यले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै स्वास्थको ख्याल आफै गर्न सकिने बताएका छन।
उनले कोरोना भाईरसलाई जित्न आफुमा आत्मबल बढाउनु पर्ने , खानामा ध्यान दिने, तातो पानी, पिउने नुन पानीले बिहान बेलुका कुल्ला गर्ने,निरन्तर रुपमा तातो पानीमा कागति, नुन, मरिच, जुवानो, अदुवा, हलेदो, घरायसी औषधीको प्रयोग गर्ने साथै समय मिले सम्म घर वरिपरी भए पनि एक्सर्साईज गरे सहजै कोरोनालाई जित्न सकिने सुझाब समेत दिएका छन। यदी कुनैपनि ब्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा अथवा कुनै परामर्श, जानकारी लिनुपरे बिना हिच्किचाहट इमो सम्पर्क न:- ००९७४-७७१२५२४५ मा सम्पर्क गर्न डा. शाक्यले सबैलाई अनुरोध गरेका छन।